Midika Inona Moa Izany Ny Maha-Olom-pirenena Japoney Taorian’ilay Famonoana Nataon’ny ISIS? · Global Voices teny Malagasy
Midika Inona Moa Izany Ny Maha-Olom-pirenena Japoney Taorian'ilay Famonoana Nataon'ny ISIS?
Voadika ny 06 Febroary 2015 17:56 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Español, English
Sary nafangaron'i Izumi MIHASHI
Tamin'ny 1945, ny firosoan'ny tafika Amerikana sy ny fandrisihan'ny miaramila Japoney dia nanosika sivily an'aliny tao Okinawa hamono ny tenany, mba tsy ho azo sambo-belona. Ny fihetsik'ireo Japoney mpisera amin'ny aterineto taorian'ny famonoana tsy ela akory nataon'ny ISIS an'i Kenji Goto sy Haruna Yukawa, sivily roa takalonaina teo an-tànany, dia maneho ny fepetra faran'izay henjana ateraky ny zava-doza tahàka ilay iray tao Okinawa taona maro lasa izay.
Dewi Sukarno, olo-malazan'ny fahitalavitra Japoney ary vady navelan'i Sukarno, filoha voalohany tao Indonezia, dia niteny fa niriany raha mba namono ny tenany fotsiny ireo takalonaina:
私は １９７０年６月、３才３ヶ月になった娘のカリナを連れて、パリからスカルノ大統領の 死の床に殺される事を覚悟で馳せ参じました。その時、只ひとつのことを神に祈りました。「もし私が銃弾に倒れることがあったら、どうか数秒でもいい、 カリナの命を我が手で絶つ力を与えて下さい」と願ったのです。カリナが敵の手におちることなど考えられなかったからです。不謹慎ではありますが、後藤さんに話すことが出来たらいっそ自決してほしいと言いたい。私が彼の母親だったらそう言います。我が子を英雄にする為にも　・・・
Tamin'ny Jona 1970, nentiko niaraka tamiko tany Parisy ny zanako vavikely telo taona sy telo volana, Carina, zanako tamin'ny vadiko efa maty, ny Filoha Sukarno, efa tsara fiomanana ny hisy hamono. Zavatra tokana monja no nangatahako tamin'Andriamanitra: “Raha tsy maintsy ho faty voatifitra aho, miangavy mba omeo segondra vitsy hamonoako an'i Carina amin'ny tanako ihany,” Nantenaiko izany, tsy haiko novinaniana ny hoe i Carina latsaka ho eo an-tànan'ny fahavalo. Tamin'ny fahafantarana fa mety ho tsy fitandremana izany, raha toa afa-niresaka tamin'i Goto aho, namporisihako izy hanatanteraka ny “harakiri”. Raha izaho no reniny, dia izay no nataoko — tiako raha mba lasa maherifo ny zanako lahy.
Nahazo fanehoankevitra fankasitrahana maherin'ny 50 noho ny nampiakoany ny eritretrir'izy ireo ny bilaogin'i Sukarno (na dia tsy ilaina akory aza ny hijeren'i Sukarno sy handrindràny ny fanehoankevitra ao amin'ny bilaoginy). Fanehoankevitra iray tsy nitononana anarana no mivaky hoe :
Miaro ny zony handeha tany ny sasany tamin'ireo mpanao gazety, saingy izao no vokany. Mety zava-dehibe ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety, saingy mba manao ahoana ny momba ny andraikitra amin'ny fandraisana ny vahoaka Japoney iray manontolo ho toy ny fahavalo ?
Niharan'ny eso be tety anaty aterineto ny masoivoho Japoney tamin'ny famelàny ho irery ny terataniny tanatinà raharaha mafàna tany ivelany. Asa Nonami, mpanoratra tantaranà heloka bevava foronina, milaza hoe :
Mpanao fanadihadiana ho an'ny orinasa fanaovana gazety lehibe iray ny namako. Niteny hatrany izy fa na indray mandeha aza tsy mbola nanampy azy ny Masoivoho Japoney, rehefa misy zava-tsarotra manjo azy any amin'ny firenena vahiny misy azy. Ny masoivohon'ny firenena hafa no manampy azy mandrakariva satria tsy mahavita ny hijoro sy hitazana fotsiny mihitsy. Toa tokony hiatrika ny tena zava-misy isika hoe olon'ny firenena tahaka izany.
Rieko Saibara, mpanakanto mpamokatra manga, mahatsiaro ny fiteny mahazatra ny vadiny taloha izay mpakasary an'ady :
Fony mbola velona izy, nilaza tamiko i Kamo fa voatifitra tao Myanmar ary niezaka ny nanavotra tena ho ao amin'ny masoivoho Japoney. Vantany vao voamarin'ireo mpiasa tao amin'ny masoivoho ny maha-teratany Japoney azy, nakaton'izy ireo ny varavarana. Zara izy raha afaka nandositra nanavotra aina, ary taty aoriana kely, nitatitra izay nitranga tamin'ny mpampianatra azy izy, izay nitrerona azy hoe : “Gaigy ianao! Ahoana no dia hisian'ny olona adala tahaka anao! Madosira tsy ampisalasalàna any amin'ny Masoivoho Amerikana! Ho nanampy anao ry zareo, na iza ianao na iza!”
Masahiko Komura, filoha lefitry ny Antoko Liberaly Demaokratika ao Japana, ts nanafina akory ny tsy fangorahany ireo takalonaina.
Tsy fahasahiana ny fidirana any amin'ny zara-tanin'ny mpampihorohoro na dia efa nampitandreman'ny governemanta Japoney aza, fa tena hadalàna tanteraka, na dia lalina toy inona aza ny fitiavany sy fahatsapàny ny iraka tanterahany.
Kanefa, tsy ny Japoney rehetra mpampiasa aterineto no dòdona hanatsiny ireto farany niharan'ny vonon'ny ISIS. Keigo Takeda, tale fahiny tao amin'ny gazety Japoney mitovy amin'ny Newsweek, nanazava ny fahatakarany ny andraikitry ny fanjakàna manoloana ny olom-pireneny :
違うね。セクハラでDVで保険料未納で反日的で興味本位で行って取っ捕まっても国民である限り救出努力義務を負うのが国家。 RT @ararano 個人が危険地帯に行く。それを止める意見も聞かず、自ら勝手にもたらした災い。それに無限責任を政府は追わないのが、道理。なにをトチ狂っているの
Tsia. Na dia ireo lehilahy mpila sotasota amin'ny resaka ara-nofo sy mpankahàla Japoney tsy nandoa ny latsakemboka fisotroan-dronono aza mba nandeha tany noho ny kiry te-hahafanta-javatra, ka voasambotra, tsy maintsy manandrana manampy azy ny fanjakàna, raha mbola olom-pirenena koa no anarany. [famerenana bitsika] @ararano Goto nampahafantatra ny hafa ny ezaka hanakanana azy ary nandeha tany amin'ny faritra mampidi-doza, tamin'ny di-dohany. Izy ihany no nampidi-kizo ny tenany. Na izany aza, ny andraikitry ny governemanta [manoloana ny olom-pireneny] tsy hoe efa misy fetrany voapetraka mialoha.
Tantaran'ny Japana farany
1 herinandro izayAzia Atsinanana
08 Aogositra 2021Eoropa Afovoany & Atsinanana
Bielarosiàna mpihazakazaka haingam-pandeha, noroahan'ireo manampahefana Belarosiàna handao ny Lalao Olaimpika, milaza fa hangataka fialokalofana